နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Wireless Router ကို ချိ်တ်ဆက်ခြင်းနှင့် Configure ပြုလုပ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေက Wireless Network ကို သုံးပြီဆိုမှတော့ Wireless Router နဲ့ပက်သက်လို့လည်း
သိထားရမှာပဲပေ့ါ။ ဟုတ်တယ်မို့လား။ အခုပြောပြမှာကဗျာ.... Wireless Router ရဲ့ Configuration တွေကို
Update လုပ်ဖို့ အတွက် အဲဒီ Wireless Router ကို Computer နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက် အသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့
အကြောင်းအရာလေးပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ Wireless Router ရဲ့ Configuration တွေ Update လုပ်ဖို့ အတွက်
Router ကိုဆက်သွယ်ဖို့တော့ လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး Wireless Router ၇ဲ့ Screen ကို Access
လုပ်ဖို့အတွက် Router ရဲ့ IP Address ကို သိမှရပါမယ်။ နောက်ပြီး Wireless Router ရဲ့ IP Address ကိုသိမှ
ရပါမယ်။ နောက်ပြီး Wireless Router ထဲကိုဝင်ဖို့ အတွက် admin Log in Name နဲ့ Password ကိုသိရပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့က Wi-Fi Connection တွေရဲ့ Problem တွေနဲ့ သူတို့ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာတွေကို
သိထားသင့် ပါတယ်။1. Router ရဲ့လက်ရှိ Local IP Address ကိုသက်မှတ်ခြင်း Home Broudband router တွေမှာဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ default IP Address တွေကတော့ များသောအားဖြင့် 192.168.0.1, 192.168.1.1 , 192.168.2.1
.......Network Router တွေမှာဆိုရင် Internal home LAN အတွက် IP Address တစ်ခု၊ external Internet
WAN အတွက် IP Address တစ်ခုရှိပါတယ်။ Internal LAN - IP Address တွေက ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Default
ဥပမာ......Linksys Router တွေဆိုရင် သူ့ရဲ့ Internal IP Address ကို 192.168.1.1 D-link နဲ့ Netgear
Router တွေမှာဆိုရင် သူတို့ Router တွေရဲ့ Internal IP Address က 192.168.0.1 နဲ့ အချို့ US Robotics
Router တွေမှာ192.168.123.254 ၊ အချို့ SMC Router တွေမှာ 192.168.2.1 အစရှိသဖြင့်
အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ် Router Brand ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ သူတို့ရဲ့ default Internal IP Address
တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ Documentation မှာပါရှိပါတယ်။
Administrator တွေက ၎င်း default Internet IP Address ကို Router Setupလုပ်ရင်းပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၎င်း default Internal IP Address က Fixed အနေနဲ့ တည်ရှိတဲ့ အတွက် Router administrative
External IP Address ကတော့ Router ကို Internet ချိတ်ဆက်တဲ့ အခါမှာ ထည့်ရတာပါ။ ဒီ Address
ကိုလည်း Router ရဲ့ Administrative Console ထဲမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကဲ......IP Address သိပြီဆိုရင်တော့
2. မိမိ Computer က Router နဲ့ Ethernet Cable နဲ့သော်လည်းကောင်း Wireless သော်လည်းကောင်း
ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ Computer မှာ Valid IP Address ရှိနေရပါမယ်။ ဆိုလိုတာက Router ရဲ့ IP
Address နဲ့ Computer ရဲ့ IP Address ကလိုက်လျောညီထွေ၇ှိ၇မယ်လို့ပြောတာပါ။
3. Router ရဲ့ Local Internal IP Address ကိုအသုံးပြုပြီး Browser နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ။ Browser ရဲ့ Address Bar မှာ
" http:// 192.168.1.1 / "
ုဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ Router ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက် User Name နဲ့ Password တောင်းတဲ့ Box
ကျလာပါလိမ့်မယ်။ Router ရဲ့ admin Screen ကို အသုံးပြုဖို့ User name ရဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ User
Name နဲ့ Password က Router ရဲ့ Manual စာအုပ်(or) docomentation မှာပါပါတယ်။
4. အကယ်လို့ Brower ကနေ Error Message ကျလာရင်တော့ မိမိ Computer နဲ့ Router နဲ့က Connect
မဖြစ်သေးလို့ပါ။ Connection မိအောင် နောက်ထပ် Troubleshooting တွေထပ်လုပ်ရပါလိမ့်အုံးမယ်၊ မိမိရဲ့
Router ကို Reboot (Restart) ချလိုက်ပါ။ Network Firewall ကို ယာယီ disable လုပ်လိုက်ပါ။ Router
ကိုစက်ရုံက Default အတိုင်း Setting တွေပြန်ထားပါ။ ၎င်းနောက် အဆင့်(၃) မှာ အတိုင်း Browser
Router Configuration(Linksys WRJ54G)
Router ကို Power Cord နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ Ethernet Connection တွေအားလုံးကို ဖြုတ်လုက်ပါ။Ethernet
Connection တွေအားလုံးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ Router ရဲ့ Reset Button ကို အနည်းဆုံး 15
2. Cable Setup
မိမိ Computer နဲ့ Router ရဲ့ LAN Port တစ်ခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။
3. Accessing Router
အစောကပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း Browser ရဲ့ Address Bar မှာ Rouer ရဲ့ Internal IP Address ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
User Name ကို Blank ထားပါ။ Password ကို admin လို့ရိုက်ထည့်ပါ။
5. Setting Password
ကိုယ့်ရဲ့ Router ကို အခြားသူတွေ ၀င်ရောက် Configure လုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အတွက်ကတော့ Router
ရဲ့ Password ကိုပြောင်းပစ်ရပါမယ်။ Router ရဲ့ Password ကို Change ဖို့ အတွက် Administrator ကိုနှိပ်ပါ။
Router Password ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိပြောင်းလိုတဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးမှ Save Setting ကို Click ပါ။
6. Configure Wireless SSID
Wireless SSID ကို Configure လုပ်ဖို့အတွက် Wireless ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ၎င်းနောက် Basic Wireless Setting
ကို Click လိုက်ပါ။ Wireless Network Name (SSID) နေရာမှာ မိမိကြိုတ်နှစ်သတ်တဲ့ အမည်ထည့်ပါ။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အခုမိမိ ထည့်လိုက်တဲ့ SSID Name ကိုပဲ သုံးရတော့မှာပါ။ ၎င်းနောက် Save Setting
7. Configure Wireless WEP (or) WPA Security Key
မိမိက ကိုယ့်ရဲ့ Wireless Network ကို Secure ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။ Internet Connection က
disconnection ဖြစ်နေရင် WEP အစားWPA ကိုအသုံးပြုရမယ်။
For WPA - Wireless tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
- Wireless Security ကိုနှိပ်ပါ။
- Security Mode မှာ WPA Pre-shared Key ဆိုတာရွေးပါ။
- WPA Algorithms မှာ TKIP ကိုေ၇ွးပါ။
- ၎င်းနောက် WPA Sharedkey ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Character 8 လုံးနဲ့ 32 လုံးကြားဖြစ်ရပါမယ်။ မိမိမှတ်မိလွယ်မဲ့ စကားလုံးမျိုး
- Save Setting ကိုနှိပ်ပါ။
- Wireless ကို Click ပါ။
- Security Mode မှာ WEP ကိုရွေးပါ။
- Default Transmit Key ကို "1" လို့ထားပါ။
- WEP Encryption မှာ 128 bits 26 hex digits ကိုရွေးပါ။
- Passphrase Field မှာနှစ်သက်ရာ Passphrase ကိုထည့်ပါ။
- Generate ကိုနှိပ်ပါ။
- Generate ကိုနှိပ်လို့ Key တွေထွက်လာတဲ့ အခါ Key 1 က Code တွေကိုသေချာချရေးထားပါ။ ဒါက ကိုယ်ရဲ့ WEP
Key ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျလိုလာပါလိမ့်မယ်။
8.Final Cable Setup
မိမိရဲ့ Computer နဲ့ Router ရဲ့ LAN Port တစ်ခုခုနဲ့ ချိ်န်ဆက်ပါ။ ၎င်းနောက်နံရံက Port နဲ့ Router ရဲ့ WAN
၎င်းနောက် Control Panel ကိုသွားပါ။
Classic View ကိုပြောင်းလိုက်ပါ။
Network Connection ကိုနှိစ်ချက်နှိပ်ပါ.။
Wireless Network Connection ကို Right Click နှိပ်ပြီး Properties လို့ပြောပါ။
Wireless Network Tab ကိုသွားပါ။
Use Windows to Configure my wireless network Setting ဆိုတဲ့ဘေးက Check box ကို ON ပေးပါ။
၎င်းနောက် Add Button ကိုနှိပ်ပါ။
Network Name SSID ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အစောက ပေးထားခဲ့တဲ့ အမည် The Key is Provided for me
Automatically ဆိုတဲ့ Check Box ကိုဖြုတ်ပါ။
Network Key နေရာမှာ အစောက Key 1 ရဲ့ Code တွေကိုထည့်ပေးပါ။ Confirm မှာေ၇ာ နှစ်ခါထည့်ပေးပါ။
ok ပြိးတဲ့ အခါမှ တော့ ဒီလုပ်ငန်း စဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ ။
Posted by P Kyaw Swa at 6:48 PM